GALGALA: Taliska Ciidanka Daraawiishta Puntland ee aaga Galgala oo ka warbixiyey hawlgalo kasocda Buuraha Calmadow.
February 19, 2013 10:19 am GMT - Written by Mukhtar - Edited by Mukhtar
Galgala: (pp)– Ciidamada Daraawiishta Puntland oo maalmihii u dambaaeyey kooxda Al-shabaab kula dagaalamaayey buuraha Calmadow ee Gobalada Bari iyo Sanaag ayaa ka hadlay hawlgalada ay ka wadaan degaanadaasi, Jaamac Saciid Warsame (Afgaduud) Taliyaha Ciidamada Daraawiishta Puntland ee aaga Buuraha Calmadow oo Saxaafada la hadlay isagoo ku sugan deganaadaasi ayaa sheegay inay wiiqeen kooxda Xagjirka ah ee ku jira Buuraha calmadow.
Taliyaha Aaga Calmadow, oo ka hadlay hawlgalo ka dhacay buuraha calmadow.
Jaamac ayaa sheegay inay hawlgalo ay ku sifaynayaan haraaga kooxda Al-shabaab ay ka wadaan Buuraha Calmadow ee ku foorara Gobalka Sanaag iyo weliba Dhanka Gobalka Bari wuxuuna wacad ku maray inay cagta marin doonaan kooxdaas oo uu sheegay inay gabaabsi sii tahay, Taliyaha ayaa sheegay inay weerareen goobo ay ku tuhmaayeen Al-shabaab ayna ka dileen qaar kamid ah maleeshiyaadkii u dagaalamaayey halka ay qaar kalena qabteen qarna ay fir xadeen.
Jaamac Afgaduud ayaa dadweynaha reer Puntland ugu baaqay inay ka feejignaadaan kooxda Al-shabaab oo uu sheegay inay khatar weyn ku yihiin nolosha umadda Soomaaliyeed ayna yihiin arxan la wayaal ku gabanaaya diinta Islaamka Sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna meesha ka saaray in Al-shabaab ay kusoo qulqulayso buuraha Calmadow ayna ciidamada Puntland ka dhaariyeen inay kusoo dhuuntaan buurahaasi.
Taliyaha Ayaa tilmaamay inaysan jirin awood buuran oo katirsan Al-shabaab oo ku jirta buuraha calmadow wuxuuna sheegay kooxda halkaas ku jirta inay tahay koox tiro yar oo ku dhuumata dhulka kaymaha ah, isagoo sheegay inay kooxdaas tirada yar ay iminka naf la caari yihiin qaarkoodna ay isku soo dhiibaayaan ciidamada Daraawiishta Puntland.
Tan iyo Sanadkii 2010 oo ay Ciidamada Puntland wiiqeen koox katirsan Al-shabaab oo ku jirtay buuraha calmadow ayey mararka qaar soo qaadaayeen dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, Waxayna miinooyin ku dileen ciidamo katirsan Puntland oo ku sugnaa aaga Galgala Iyadoo Ciidamda Puntland wacad ku mareen inay cagta marin doonaan kooxdaasi.